blog အကြောင်းလေး နဲနဲမေးချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
blog အကြောင်းလေး နဲနဲမေးချင်လို့ပါ
July 2009 edited February 2010 in Blog
နောက်တခု ရှိပါသေးတယ် အဲဒါကတော့ စီဘောက် ပြသနာပါ တို့ရဲ့ စီဘောက်မှာ join ဆိုတာ မပါဘူး refresh ဆိုတာပဲ ပါတယ် အဲဒီတော့ message တခုတက်လားမတက်လားဆိုတာ ကို refresh ကိုနှိပ်နေရတယ် မနိပ်ဘူး join ပါရင် ကလစ််လုပ်ထားလိုက်ရင် message တွေကသူ့အလိုလိုတက်နေတာလေ အဲဒါလေး ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ သိရင်ပြောပြပေးပါလား :5::6::67::71:
eot ဘာလို့ လုပ်နေမှာလဲ... လေးရလေးနဲ့... @font-face ရှိနေပြီလေ... firefox 3.5 , safari3, opera 10 , IE4 တို့မှာ ရနေပြီ...
cbox ကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် အခုနောက်မှလုပ်တာတွေကတော့ refresh ပါလာတယ်။ တော်တော်များများမှာတော့ join ပဲတွေ့မိတယ်။ auto-refresh လို်ချင်ရင်တော့ account ၀ယ်မှရမယ်။ စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့အိုးက ဘယ်တော့မှ မပွက်ဘူးတဲ့။ email account ပါထည့်ထားရင် မေလ်းကို ပို့ပေးမှာပါ။ အီးအိုတီကတော့ ကိုစေတန်ပြောတာကို အရင် စမ်းကြည့်ပါဦး။ မရရင်
မှာသွားကြည့်လိုက်ပါဦး။ ကိုစေတန်ပြောထားတာကလည်း ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ EOT ဆိုတာ (မြန်မာဖောင့်ပေါ်ဖို့) အရင်တုန်းကလောက်ပဲ သုံးတော့တာလေ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖြေပေးတာကို ပြောပါတယ် တော်ပါပီ eot မလုပ်တော့ဘူး ရှုပ်တယ် စီဘောက်ကလဲ နောက်တခု ပြောင်းသုံးလိုက်တယ် အော်တိုမတက်လို့ ရပါပြီ ကျေးဇူးးးး :6:
ကျနော် ဒီကနေပဲ ဆက်မေးလိုက်ပါတော့မယ် ...
ကျနော် စမ်းလုပ်နေတဲ့ Ning ရဲ့စီဘောက်မှာ (Meebo flash chat အမျိုးအစားပါ) မြန်မာလိုမပေါ်ပဲ လေးထောင့်တုံးတွေပေါ်နေလို့ ပါ ဗျာ .. အသိတစ်ယောက်ပြောတာတော့ EOT ကြေငြာရတယ်ပြောပါတယ် .. ဟုတ်လား မဟုတ်လား သိချင်ပါတယ် .. ဟုတ်ရင်လည်း အသေးစိတ်လေး သိချင်ပါတယ် .. ကူညီပေးကြပါနော်
ကျနော် Blog တစ်ခုကိုလုပ်ထားပါတယ်.. အဲဒါကိုကျနော် http://myanmarblogdirectory.blogspot.com/ မှာ သွားပြီး စာရင်းလည်းသွင်းပြီးပါပြီ.. နောက်ပြီး ကျနော့် Blog setting ထဲက Add your blog to our listings? နဲ့ Let search engines find your blog? မှာလညး် YES ပေးထားပြီးပါပြီ.. အဲဒါကို ကျနော်ရေးထားတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့် Blog Address နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှာရင် မတွေ့ပါဘူး... Address Bar မှာ အတိအကျရိုက်ရှာမှသာ ထွက်လာပါတယ်... ပြပေးပါတယ်.. အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်မရမလဲသိရင်ပြောပေးပါခင်ဗျာ...search engine တွေကနေ ကျနော့် Blog ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အထဲမှာရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ... မြန်မာ Blog တွေစုေ၀းရာတွေမှာကောဘယ်လိုမျိုးတွေ ကျနော့် Blog ရှိကြောင်းလေးသိအောင် လုပ်ရမလဲခင်ဗျာ... (ကျနော် Blog ကြော်ငြာဖို့အတွက် နေတိုးနဲ့၀တ်မှုန်လေးနဲ့ကို ကြော်ငြာဖို့တော့ စဉ်းစားနေတယ်... ဒါရိုက်တာက ဇင်ယော်ကြီးနဲ့ပါ.. ) ဟီး ကူညီပါခင်ဗျာ...:O:O:O
ကိုယ့်ဘလော့ကို မှာအပ်ထားရင် ကိုယ့်ထဲ၀င်လေ့လာသူတွေရဲ့စာရင်းကိုလဲ ဂရပ်ပုံနဲ့ဖော်ပြပေးတယ်။
ဂူဂဲလုပ်ရင်လဲ အကို့ဘလော့ကို သူအော်တိုရှာပေးတယ်။ခင်ဗျာ့။